Hooyo Soomaaliyeed oo Xaamilo ah oo lagu dilay dalka Britain – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hooyo Soomaaliyeed oo Xaamilo ah oo lagu dilay dalka Britain
MAREEG 29 July 2015
Boliska magaalladda Bristol ee dalka Britain ayaa xaqiijiyey in Haweeney Somali ah oo la oran jirey Amal Abdi lagu dilay hoygeeda oo ku yaalla magaalladda Bristol.
Haweeneyda oo ahayd Xaamil ayaa la sheegay in habeenkii Axadda ee la soo dhaafay Tooreey lala dhacay ilaa ay ka geeriyootay.
Dadka deriska la ah Marxuumadda ayaa ku soo baraarugay iyaadoo uu dhiig qulqulayo qolkii ay ka degganayd Dabaqa 7aad ee Dhismo ku yaalla Xaafadda Longlands House ee Barton Hill ee magaalladda Bristol.
Dukaanle ay ka adeegan jirtey Marxuumad Amal Abdi ayaa sheegay inay Marxuumadda dhawaan ninkeeda ka taageertay sidii uu uga soo ambabixi lahaa Somalia, isagoo soo marayo Talyaaniga, si uu ugu wada noolaadaan dalka Britain.
Afhayeen u hadlay Boliska magaalladda Bristol ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin Somali oo 21-jir ah, kaasi oo lagu tuhunsan yahay dilka Marxuumadda.
Waxay kaloo Boliska rajeynayaan in ay dad kale u soo xiraan Dilkaasi.
Saraakiisha takhasuska u leh falalka dilalka ayaa iyagana baaritaano ka wada qolkii lagu dilay Marxuumad Amal Abdi.
Sidoo kale, Saraakiil si Khaas ah loo tababaray ayaa ka taageerayo qoyska Marxuumadda iyo dadka deriska si Warbixino kale looga helo xubnaha Bulshadda Deegaanka.
Ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa Cadaado oo isaga baxay
Madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah u furay shirka Hiigsiga Soomaaliya (Sawirro)